Maraykanka, 01 September 2017
Khamiis 1 September 2017
Duufaanta Harvey oo ka Wareegtay Houston
Magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa la filayaa in ugu dambeyn maanta ay ka nasato duufaanta Harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga Texas una jihaysatay gobolka deriska la ah ee Louisiana.
Trump oo Booqday Texas
Qorraxda ayaa marki ugu horreysay usoo baxday magaalada Houston ee gobolka Texas tan iyo marki ay garaacday duufaanta Harvey Jimcihi lasoo dhaafay.
Amuuraha Maraykanka: Duufaanta Harvey ee Gobolka Texas
Gobolka Texas ee dalkan Maraykanka waxaa ka dhacday duufaan loogu magac daray Harvey, taas oo dad ku dhinteen. Haddaba Barnaamijka Amuuraha Maraykanka ayaan ku soo qaadanaynaa, waxaana innala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Minneapolis: Waddo Loogu Magac Daray Xuseen Samatar
Magaalada Minneapolis waxaa shalay la dhagax dhigay waddo loogu magac daray Allaha u naxariistee Xuseen Samatar oo ahaa mas’uulkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee dalkan Mareykanka xil looga doorto.
Houston oo Wali La Halgameysa Fatahaad Baaxadweyn
Roobab xoog leh ayaa wali ka da,aya magaalada Houston ee gobolka Texas, kuwaasoo sii cakiray howlaha gurmadka ah ee ay wadaan kooxaha dadka badbaadiya, kadib marki ay halkaasi garaacday duufaanta Harvey.
Dhageyso Barnaamijka Qurbe ee Toddobaadkan
Duufaan iyo Roobab Weli ka Socda Houston
Magaalada Houston iyo deegaanada ku dhow ee gobolka Texas ayaa waxaa weli garaacaya roobab duufaano wata, oo la filayo inay sii socdaan maalmaha soo aadan, ayada oo kooxaha gurmadka ay isku dayayaan inay gaaraan dadka ku dhex xanniban daadadka.
Duufanta Harvey oo ku Dhufatay Texas
Duufaanta Harvey ayaa ku dhufatay dhinaca bariga dalkan Mareykanka koonfurta Gobolka Texas.
Duufaanta Harvey oo Garaaceysa Texas
Duufaanta Harvey ayaa gabaldhicii Jimcihi bilowday inay garaacdo xeebaha gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, iyadoo Dowlada Mareykankana ka digtay masiibo xoog leh oo ka dhalata duufaantan aadka u xoogan.
Mareykanka oo Dal-ku-Galka ka Joojinaya Afar Dal
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheeneyso inay joojiso inay dal ku gal siiso dadka kasoo jeeda afar dal oo diiday inay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo masaafurinayo Mareykanka.
Soomaalida Minnesota oo loo Dhisayo Suuq u Gaar ah
Guddiga Hormarinta magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota, ayaa maanta go’aamiyay goobtii laga dhisi lahaa Suuq Weyn oo ay Soomaalida Minnesota yeelaneyso.